Hambalyo Turkiga W/Q: Mohamed Aden Hassan.
Sunday October 18, 2020 - 09:32:56 in Articles by Hadhwanaag News
TWITTER: HON Mohamed Aden Hassan
Hambalyo Dalka turkiga o kaalinta labaad ka galay dalalka sameeya e soo saara diyaaradaha Drones ka ah e iskeed isu wada bilaa duuliye isla markaana meel fog laga hago.
Diyaraada Bayraktar TB2 o ah diyaarad drone ah ayaa badashay qiyaasihi jirey e drone ka iyo sida lookala horeeyay isla markaana wax walba ka dhigtay cidhibta o madaxa la kor mariyay marka laga yimaado diyaarada F 35 E United State Ka.
Tobanka dal e drone ka dunida ugu wanaagsan sameeya waa:
1. United States 2.Turkey 3. United Kingdom 4. Italy 5.France 6. Spain 7. Germany 8. Australia 9. Indonesia 10. Greece.
Diyaarada Bayraktar TB2 waxay si toos ah usoo shaac baxday dagaaladii Syria iyo libiya e turkiga galay waxayna si toos ah u burburisay dhamaan diyaaradihi iyo gantaaladii cadawga.
Bayraktar TB2 waa diyaarad dhexdhexaad ah oo Turki ah oo aan cidi wadin oo aan duuliyaha wadin oo awood u leh in meel fog laga hago ama hawlo duulimaad madax-bannaan oo ay soo saarto shirkadda Turkey′s Baykar ay ugu horreyso Ciidanka Cirka ee Turkiga.
Nooca Engine ka diyaaradana waa Rotax 912 Dulimaadki ugu horeyay waxay samaysay August 2014